Hollande oo ka hadley mustaqbalka France - BBC News Somali
Hollande oo ka hadley mustaqbalka France
7 Maajo 2012
Image caption Madaxweynaha cusub ee France
Doorashadii madaxtiimada ee dalka Faransiiska ayaa waxaa ku guuleystey Francois Hollande, ka dib markii xisbigiisa hantiwadaagga uu heley 52% codadkii doorashada, halka xisbiga madaxweyne Nicholas Sarkozy uu helay 48%.
Madaxweynihii ugu dambeyeey ee ka socda dhinaca bidixda ee hantiwadaagga waxaa uu ahaa Francois Mitterand, 17 sanno kadibna markii ugu horeysey ayaa Hollande noqonayaa ninkii ugu horeeyey ee xisbigaasi ka socda ee talada dalka qabta.
Mr Hollande waxaa hawsha ugu horeysa ee uu qabanayo ay noqon doontaa dhismaha dowlad cusub, wax yar kadib markii uu taageerayaashiisa u sheegey in guushiisa ay rajo wanaagsan u tahay in la soo afjaro khalkhalka dhaqaale ee jira.
Mr Hollande waxaa uu balanqaadey inuu dib uga shaqeyn doono deymaha dowladda ee dalalka ku jira ururka Eurozone si diiradda loo saaro kororka dhaqaalaha.
Musharixii xisbiga midigta dhexe, Nicolas Sarkozy ayaa noqonaya madaxweyinihii ugu horeeyey ee Faransiis ah oo tan iyo 1981kii ku guuldareysta inuuhelo xili labaad oo talada dalka uu hayo.
Waxaa uu talada ku wareejin doonaa Mr Hollande, 15ka bisha May, taana waxay ka dambeysey wadahadal saraakiisha labada dhinac ay yeesheen kadib.
Sarkozy waxaa uu noqonayaa hoggaamiyihii ugu dambeeyey ee reer Yurub ee xafiiska laga tuuro, xili dadka codka dhiibanaya ay si weyn uga careysan yihiin talaabooyinka lagu dhimayo kharashaadka dowladda ee ka dhashey mushkiladda deymaha ee dalalka Yurub.